I-Ultrasonic ehlukile kwi-Hydrodesulfurization - Hielscher Ultrasound Technology
Amafutha okucwenga amafutha ahlangene nezinsiza ezingasetshenzisiwe zesimbule (omuncu) kanye nokucindezela kwemvelo ngokulawula okuqukethwe kwe-sulfur kagesi. Ngesikhathi esifanayo, izindleko ze-hydrodesulfurization (HDS) ezivamile zikhuphuka ngenxa ye-hydrogen edingekayo. Ukwelapha i-ultrasonic cavitation iyindlela ephumelelayo ehlukile.
Amafutha asetsheni aqukethe ama-sulfur compounds. Lokhu kubangelwa ukungcoliswa kwezinto eziphilayo eziqukethe isulfure ngesikhathi kwakheka kwemvelo kwamafutha.
Izimoto, njengezimoto, izindiza zezindiza kanye nezikebhe zasolwandle noma izitshalo zamandla bangela sulfur dioxide (SO2) ukukhishwa ngenxa yokushisa kwamafutha e-petroleum. Sulfure efanayo – ngisho nasezindaweni eziphansi kakhulu – kubangelwa ukulimala ezakhiweni zensimbi enhle ekuguqulweni kwezinto ezincane ezisezingeni eliphansi ngaphansi kwezinto zokufakiswa kwe-petroleum. Imithethonqubo yakamuva yemvelo idinga ukuxoshwa okujulile kakhulu ukuhlangabezana nayo i-ultra-low sulfur diesel (ULSD) imininingwane.
Ingemuva – I-Hydrodesulfurization (HDS)
Hydrodesulfurization (I-HDS) iyinhlangano evamile inqubo yokuzikhethela ngokususwa kwesulfure emikhiqizo ye-petroleum. Kule nqubo, izingxenyana zesulfurous zamafutha angcolile zixubene ne-hydrogen kanye nesisusa isabela ku-hydrogen sulfide. Ngokuvamile, i-catalyst iqukethe isisekelo se-alumina esihlanganiswe ne-cobalt ne-molybdenum. Njengamafutha izimpahla zithola okuningi, izingcindezi eziphakeme kanye nezinye izinto ezidingekayo ezidingekayo kudingekile ukuxoshwa. Ukubuyisela kabusha ama-sulfur amakhemikhali (isib. 4,6-dimethyldibenzothiophene) ayikwazi ukususwa ngokusebenzisa i-hydrodesulfurization, ngenxa yokusebenza kwawo okuphansi (bheka Deshpande 2004).
i-desulfurization esebenzayo i-ultrasonically
Okunye okunye okushiwo i-hydrodesulfurization yiyona i-desulfurization esebenzayo i-ultrasonically. Ukuvezwa kweziphuzo kumagagasi e-ultrasonic okubangela kakhulu i-acoustic cavitation. Lona ukwakheka futhi okulandelayo ukuwa okudlova kwe-vacuum encane (cavitation) bubbles. Ekhaya, izimo ezimbi kakhulu zivela ekuweleni kobudlova kwebhola ngalinye:
Ukushisa: kuze kube ngu-5000 uKelvin
Ukucindezela: kuze kufike ku-2000 Atmospheres
Amajijethi e-Liquid: kufika ku-1000km / hr.
Izimo ezinjalo zikhuthaza a okungcono kwamakhemikhali of catalysts by ngcono micro-ukuxuba. Ikakhulukazi izinga lokushisa lendawo shintsha ama-chemical reaction kinetics yenqubo yokuxoshwa. (bheka Sonochemistry). Lo mphumela uvumela okunye okunye – engabizi kakhulu – izithandwa noma okunye okukhipha amakhemikhali e-desulfurization ukuze isetshenziswe. Deshpande et al. (2004) uphenya uhlelo lwe-oxidative oluhlanganisa i-sodium carbonate ne-hydrogen peroxide ohlelweni lwe-biphasic lwe-diesel ne-acetonitrile. I-Ultrasonication isetshenziswe ohlelweni lwe-biphasic. Ucwaningo luzuzwe ukunciphisa okuqukethwe kwe-DMDBT ngamaphesenti angu-90 ema-sampuli e-diesel.
I-Ultrasonic Process Equipment
I-Hielscher yiyona ehola umphakeli wamandla aphezulu ekhono lama-ultrasonic, emhlabeni jikelele. Njengoba i-Hielscher yenza amaprosesa ase ultrasonic kuze kube 16kW amandla ngedivayisi eyodwa, nakhu akukho mkhawulo esitshalweni sesitshalo noma ukucubungula amandla. Amaqoqo ezinhlelo ezimbalwa ze-16kW asetshenziselwa ukusetshenziselwa ukugeleza kwamanzi amakhulu. Ukusebenza kwephethiloli yezohwebo ayidingi amandla amaningi e-ultrasonic. Imfuneko yangempela yamandla inganqunywa isebenzisa iproksi ye-1kW ultrasonic ebangeni lesikhulu. Yonke imiphumela evela ezinhlolweni ezinjalo ze-bench-top ingaba senziwe kalula.
Uma kudingekile, amadivayisi e-ultrasonic aqinisekisiwe e-FM ne-ATEX (isb I-UIP1000-Exd) ziyatholakala ukuthola indodanaication ezindaweni eziyingozi.
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokucubungula ubuchwepheshe. Izindleko zokucubungula nge-Ultrasonic kubangelwa ukutshalwa kwezimali
for amadivayisi ultrasonic, izindleko Umbuso kanye nokugcinwa. Okuvelele ukusebenza kahle kwamandla (bheka ishadi) yamadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher kusiza ukunciphisa izindleko zesevisi.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ku-desulfurization.
Deshpande, A., Bassi, A., Prakash, A. (2004): Ukuxoshwa kwe-Ultrasound-Assisted, Base-Catalyzed Oxidation ye-4,6-Dimethyldibenzothiophene kuhlelo lwe-Biphasic Diesel-Acetonitrile System; ku: Energy Fuels, 19 (1), 28 -34, 2005.
Mei H., Mei BW, Yen TF (2003): Indlela entsha yokuthola uphethiloli we-ultra-low sulfur ophansi nge-ultrasound deulfurization esebenzayo; ku: Ushukela, Umqulu 82, Inombolo 4, Mashi 2003, iphe. 405-414 (10), 2003.
I-NPRA – Umthetho we-ULSD
I-Diesel Fuel Alliance ehlanzekile